Yan Aung: ဇော်ဂျီလက်ကွက်ဖြင့် စာရိုက်နည်းများ....
ဒီတစ်ခါတော့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်အကြောင်း နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်. လက်ရှိရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂါတွေအတွက်တော့ ဒီပို့စ်လေးက နှမ်းဖြူးသလို ဘာမှမပြောပလောက်ပေမယ့် အခုမှ စရေးမယ့် ဘလော့ဂါအသစ်လေးတွေ၊ လူကြီးတွေအတွက်တော့ အသုံးဝင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဆီကို တစ်ချို့ အီးမေးလ်ပို့ပါတယ်. ဇော်ဂျီမှာ ပါဠိပါဋ္ဌ်ဆင့်တွေ ဘယ်လိုရိုက်ရလဲ မသိလို့ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်တဲ့.
ဒါတင်မကသေးပါဘူး. တစ်ချို့သော ဘလော့ဂ်တွေကို လိုက်ကြည့်မိတော့ သူတို့တွေ ပါဠိပါဋ္ဌ်ဆင့်တွေကို မှန်ကန်အောင် မရိုက်ယူနိုင်တာတွေ တွေ့နေရပါတယ်. ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်လို့ စကားပလ္လင်ခံလိုပါတယ် ခင်ဗျာ.
ဒါက ဇော်ဂျီလက်ကွက်ပါ. ဒေါင်းလုပ် ရယူနိုင်ပါတယ်.
ဇော်ဂျီလက်ကွက်မှာ အင်္ဂလိပ်နဲ့ မြန်မာကို တွဲရိုက်လို့သိပ်လွယ်ကူပါတယ်. Ctrl+Shift နှိပ်လိုက်တာနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မြန်မာစာကို အလွယ်တကူ Switch လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်.
“~” ဆိုတဲ့ လက်ဝဲဖက်အပေါ်ဆုံးက Key လေးကို ဇော်ဂျီမှာ Tide Key လို့ခေါ်ပါတယ်. အရမ်းအသုံးဝင်တဲ့ Key လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ဘယ်လိုအသုံးဝင်လဲဆိုတာ နောက်ဆက်ဖတ်ရင် သိလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ.
ဇော်ဂျီကီးဘုတ်ရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ Key တစ်ခုတည်းမှာ စာလုံး လေးလုံးမြှုပ်နှံထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်. တစ်ခြားသော Unicode System တွေမှာဆိုရင်တော့ ပါဋ္ဌ်ဆင့်တွေ ရိုက်ယူဖို့ Alt+1234 စတဲ့ နံပါတ်တွေ ရိုက်ယူရတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်. အဲဒါတွေကို အလွတ်သိအောင် မှတ်ယူရတာ (သို့) ကီးဘုတ် Layout ကို တစ်ချိန်လုံး ဆောင်ထားရတာမျိုးတွေကို ဇော်ဂျီ ယူနီကုဒ်စနစ်က ဖြေရှင်းပေးလိုက်ပါတယ်. Compact ဖြစ်တဲ့ Unicode System တစ်ခု ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
ဥပမာလေးတွေနဲ့ စပြီး စမ်းရိုက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား…
ရှင်မဟာ ရဋ္ဌသာရ ရေးသားတော်မူတဲ့ စတုဓမ္မသာရ ကိုးခန်းပျို့ထဲက ကောက်နုတ်ချက်လေးတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်.
“ဧသုကာရီ၊ ကျော်ညီသတင်း၊ ထိုသည်မင်းနှင့်၊ ရောင်းရင်းတူကွ၊ ငယ်သော်ကလျှင်၊ ပိယသဟာ၊ မေတ္တာကျွန်းမ၀င်၊ တိုင်ပင်ကြသော်၊ ချစ်မွေ့လျော်သား…”
အဲဒီ့စာပိုဒ်လေးကို ရိုက်မယ်ဆိုရင် ပထမဦးဆုံး “ဧ” ဆိုတာကို ရိုက်ဖို့အတွက် လိုက်ကြည့်တော့ [ ဆိုတဲ့ Key လေးရဲ့ အပေါ်မှာ တွေ့ရပါတယ်. ဒါကြောင့် shift+[ ကိုရိုက်ပါတယ်.
ကျန်တဲ့စာလုံးလေးတွေကို ဆက်တိုက်ကြိုးစားရိုက်ကြည့်ပါ. အခက်အခဲမရှိနိုင်ပါဘူး. ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ရိုက်ယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ကဲ. မေတ္တာဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးနားကို ရောက်လာပါပြီနော်. ပါဋ္ဌ်ဆင့်ကို စရိုက်ပါတော့မယ်.
A =ေ
R = မ
W = တ
“မေတ” ဆိုတာထိ ရပြီနော်.
တ၀မ်းပူ နောက်တစ်လုံးရိုက်ဖို့အတွက် ကီးဘုတ်ကို ကြည့်လိုက်တော့ “w” ဆိုတဲ့ ကီးလေးရဲ့ ညာဖက်အောက်နားမှာ တ၀မ်းပူ နောက်တစ်လုံးတွေ့ရပါတယ်.
ဇော်ဂျီကီးဘုတ်မှာ ရှင်းပြထားတာက လက်ယာဘက်အောက်က စကားလုံးကို ရိုက်မယ်ဆိုရင် Tide+Key (သို့) Ctrl+Alt+Key လို့ ပြောထားပါတယ်.
မေတ ဆိုတာပြီးသွားရင် နောက်ထပ် တ၀မ်းပူကို ဒီလိုရိုက်မယ်.
~ + w = တ္တ
M =ာ
မေတ္တာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး ပေါ်လာပါပြီ ခင်ဗျား
ဒါဆိုရင် ကျန်တဲ့ ပါဋ္ဌ်ဆင့်စကားလုံးလေးတွေကို စမ်းရိုက်လို့ရနိုင်ပါပြီ.
ခု ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာတွေက key တစ်ခုစီမှာ ရှိတဲ့ ပုံမှန် အက္ခရာကို ရိုက်နည်း၊ Shift ခံပြီး အပေါ်က အက္ခရာကိုရိုက်နည်း၊ ညာဖက်အောက်နားမှာ ရှိတဲ့ အက္ခရာကို ~ key ခံပြီး ရိုက်ယူနည်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
ညာဖက်အပေါ်က အက္ခရာကို ဘယ်လိုရိုက်မလဲ ဆိုတာကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါမယ်.
“ဃရာဝါသ၊ သမ္ဗာဓဖြင့်၊ ဒုက္ခဖွဲ့နှောင်၊ လူတို့ဘောင်ဝယ်၊ အိမ်ထောင်ညွှတ်ကွင်း၊ သံချိုင့်တွင်းမှ၊ ရှင်းရှင်းလွတ်စင်၊ တောချောင်ဝင်၍…”
ကဲ. ဒီစာပိုဒ်လေးကို ရိုက်ကြည့်ရအောင်.
Shift+C = ဃ
Key ၏ ညာဖက်အပေါ်မှ အက္ခရာကို ရိုက်ယူနည်း
0 = သ
ဒီထိရတာက “သမ” ပဲ ရှိသေးတယ်.
“ဗ” ကို “မ” အောက်မှာ ပေါ်ဖုိ့ ရိုက်မယ်.
ကီးဘုတ်မှာ ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ အောက်ဆင့် “ဗ” က “A” Key ရဲ့ ညာဖက်အပေါ်မှာ ရှိနေပါတယ်.
အဲဒါကို ဘယ်လိုရိုက်ယူရမလဲဆိုတော့ ဇော်ဂျီလက်ကွက်မှာ ပြောထားတာက Ctrl+Shift+Key (သို့) Shift+Tide+Key လို့ ပြောထားပါတယ်.
“သမ” လို့ ရိုက်ပြီးရင်
Ctrl+Shift+Alt+A =္ဗ
ဆိုပြီး ရိုက်ယူလိုက်ပါမယ် ခင်ဗျား
အခုထိ ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တာကတော့ ဇော်ဂျီကီးတစ်ခုစီမှာ ရှိနေတဲ့ အက္ခရာ လေးခုကို ရိုက်ယူနည်းတွေပါပဲ.
ပုံမှန်အက္ခရာအတိုင်း ရိုက်ချင်ရင် သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာ ကီးကို ရိုက်ယူပါ.
လက်ဝဲဖက်အပေါ်က အက္ခရာကို ရိုက်ချင်ရင် Shift+ Key ကို ရိုက်ယူပါ
လက်ယာဖက်အောက်က အက္ခရာကို ရိုက်ချင်ရင် ~+Key (သို့) Ctrl+Alt+Key ကို ရိုက်ယူပါ.
လက်ယာဖက်အပေါ်က အက္ခရာကို ရိုက်ချင်ရင်တော့ Shift+~+Key (သို့) Ctrl+Alt+Shift+Key ကို ရိုက်ယူပါ.
ကဲ. တစ်ချို့ ခက်ခဲမယ်ဆိုတာလေးတွေကို အစမ်းရိုက်ကြည့်ကြရအောင်.
“မဇ္ဈိမ” ဆိုတာကို ရိုက်ကြည့်ပါ.
Shift + Z = ဇ
Ctrl+Alt+Shift+N =္ဈ
D =ိ
ဒီစာပိုဒ်လေးကို ရိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့တတ်ကျွမ်းမှုကို စစ်ဆေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား...
“မသိတတ်ဘိ - မောဟသိလော့၊ အဟိရိက - မရှက်စွတည့်၊ နောတ္တပ္ပမူ - မလန့်ဟူ၏၊ မှတ်ယူပျံ့လျက် - မငြိမ်သက်ထ - ဥဒ္ဓစ္စနှင့်၊ လောဘသဘော - လိုချင်ဟော၍၊ မှားသောအမြင် - ဒိဋ္ဌိတွင်သား၊ မာနကားမူ - ထောင်လွှားကြွတက်၊ ဒေါသတွက်ကြောင့် - ခက်ခက်ထန်ထန်၊ ဣသာလျှံမူ - လွန်ငြူစူ၏။ ပြောထူမစ္ဆေ - ၀န်တိုလေသတဲ့၊ တစ်ထွေမှတ်ကြ - ကုက္ကုစကား၊ နောင်တတစ်ဖန် - ပူပန်ထန်ပြင်း၊ ထိုင်းခြင်းထိန၊ မှိုင်းမိဒ္ဓနှင့်၊ ဗုဒ္ဓစသည့်၊ ယုံမှားဘိမူ - ၀ိစိကိစ္ဆာ၊ ဆယ့်လေးဖြာသည်၊ မှန်စွာ အကုသိုလ်ချည်းတည်း။”
(နှာ - ၁၃၊ “ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ”၊ ရှင်ဇနကာဘိဝံသ)
“ဣသာ” ကို ဒီလိုရိုက်ပါ.
Ctrl+Shift+4 = ဣ
O+M = သာ
“ကုက္ကုစ” ကို ဒီလိုရိုက်ပါ.
U+K = ကု
U = က
Shift+U =္က
Shift + K =ု
P = စ
အဲလောက်ပဲ ခက်မယ်ထင်ပါတယ်. ကျန်တာတွေတော့ ကြိုးစားရိုက်ကြည့်ကြပါ. မရှင်းတာရှိရင် ကော်မန့်မှာ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.
Soe Mya Nandar Thet said...
I tried doing it myself as i was hlaf awake. As i never type in Burmese Fonts ever i find it quite hard. However i'd like to get that ability and should learn bcos i am Burmese Girl. Needabits of times. Why Burmese Font isnt that easy they way normally keybord does?? Thanks you for bring that post up as it will help alots people like me.
Tab ရဲ့အပေါ်က key ဟာ Tilda တီးလ်ဒါခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျား ဆရာလုပ်လိုတဲ့သဘောမဟုတ်ပါ - မှားမှာဆိုး လို့ပါ။
>ko aung nn.... Thanks for fixing my typo. I really appreciate it..
..တစ်ခြားသော Unicode System တွေမှာဆိုရင်တော့ ပါဋ္ဌ်ဆင့်တွေ ရိုက်ယူဖို့ Alt+1234 စတဲ့ နံပါတ်တွေ ရိုက်ယူရတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်. . ဆိုတာ နည်းနည်း မှားနေတယ် ထင်ပါတယ်။ ဘယ်ယူနီကုတ်က အဲလို ရိုက်ရတာရှိလည်း ပြန်ပြီး စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ Unicode မဟုတ်ခင်တုန်းကသာ အဲဒီ နံပါတ်တွေ သုံးခဲ့ပြီး ယူနီကုတ်မှာ အဲဒါ မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော်လဲ ဆရာကြီးလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇော်ဂျီကို ယူနီကုတ်စစ်တယ် မစစ်ဘူး နဲ့ မလိုတဲ့သူတွေ အပစ်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဇော်ဂျီသုံးစွဲသူအချင်းချင်း လက်တို့တဲ့ သဘောပါ။
nay hlaing said...
တို့ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိစေဖို့.....